umenzi womatshini we-sorter,irayisi yombala we-sorter umatshini wexabiso
1.Ngoyilo lwazo lweemodyuli, Uluhlu lomatshini we-sorter umbala unokujongana neempawu ezininzi. Ngexesha imodyuli enye inokusetyenziselwa ukwenza iisampulu zeebatch ezincinci kuhlaliso lwelebhu, ukusuka phantsi njenge 500 kg / iyure ukuya 20 iitoni / iyure.
2.I-Optical sorter inokutshintshwa ngokulula phakathi kweendlela, Yenzelwe ukucwangcisa iintlobo ezahlukeneyo zerayisi kwaye iyakwazi ukwala kwangaxeshanye iziphene ezibonakalayo, iziphene ezibonakalayo, kunye neziphene zombala omnye.
Iinkcukacha zeMveliso yomatshini waseRice sorter
Umatshini we-VTXM uthotho lombala we-sorter ukhethe inani elikhulu lamashishini akumgangatho wehlabathi avelise ukukhanya kwe-pixel yomgama wokukhanya kwe-CCD, iinxalenye zombane.Umatshini wokucoca ulwelo kwaye unezixhobo zobomi obude, ukuvumelana okuhle kwesantya esiphezulu se-solenoid vala,Umsebenzi ozinzileyo nothembekileyo. Umatshini wokuhlela irayisi unokuchaneka okuphezulu kukhetho lwemibala yemveliso, Ingakumbi irayisi enesisu esincinci kwisirayisi esigqityiweyo kunye neerayisi kumngxunya wesikhumba ichaza into eyahlukileyo nokususa amandla ayo.,Umatshini wokuhlelwa kombala ukwalungele amasuntswana amakhulu ekukhetheni umbala.
Ukusetyenziswa komatshini we-sorter wombala
Ilayisi, ingqolowa, umbona, isoya, peanut, Imbewu yejongilanga, ialtnut, ialmond, IQuinoa, ityiwa, medlar, ipistachio, Imbotyi yezintso, IChili, Ibhatyi ebomvu, abanye.
Ilitye le-Quartz, Isanti ye-Quartz, Potassium feldspar, Ibarite, Calcite, Limestone, Lulu, Imarble kunye nezinye.
Inkunkuma yeplasitiki, Ipellet yeplasitiki, Iziqwenga zeplastiki, Iiglasi zeplastiki, Iplastiki yebhotile yeplastiki, Isikram sebhotile yePET, I-flake yeplastikhi yeABS, Iplastikhi yePP, Iplastiki ehlaziyiweyo, abanye.
Imigaqo yokusebenza yomatshini wokukhetha imibala
Beka izixhobo kwi-feed-hopper yomatshini wokuhambisa umbala,ihamba ecaleni kweplate etyibilizayo ide idlulele kwi-chute ethe tyaba, apho iphononongwa ngokwahlukeneyo kwi-360 ° kwaye ihlelwe yi-RGB yeekhamera zombala ogcweleyo. Ukugcina kwiziginali ezifunyenwe sisixhobo sochwephesha, isoftware yokuhlaziya imibala ilawula isixhobo se-pneumatic, eyahlula ngokwasemzimbeni imveliso engafunekiyo kwabangqinayo, abafikelele ngokwemvelo ekukhupheleni i-hopper yabo. Iimveliso ezivunyiweyo endaweni yoko ziphambukiswa yijet yomoya oxineneyo oveliswe yi-ejector efanelekileyo kwaye ikhutshelwe kwi-hopper yecala elingaphambili. Kwiinguqulelo ezenzekelayo zokwenza indawo, Imveliso ehleliweyo okanye eyalahliweyo ukuba idluliselwe kwelinye icandelo lomatshini wokuhlela irayisi ukuya kwinkqubo efanayo.
Ipharamitha yobugcisa yomatshini we-sorter
Qhubeka ngaphezulu kwexabiso (Kubi:Kulungile)
Ukusebenza kwevidiyo yomatshini werayisi wombala we-sorter
Nxibelelana nathi ngomatshini waseRice sorter